पहिलो नेपाली राष्ट्रपति र नेपाली कांग्रेसको मधेसी नेता
२००४ माघ २२
यादव बिसं २०४७ देखि २०५० सम्म नेपाली कांग्रेसको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिए । उनी बिसं २०५६ मा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वारको रूपमा प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचित भएका थिए। उक्त निर्वाचन पछि उनी स्वास्थ्यमन्त्री भए । वि.सं. २०६४ बैशाखमा, यादवको जनकपुर स्थित निवासमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका लडाकुहरूले आक्रमण गरे। उनीहरूले घरमा कब्जा गरेको एउटा सूचना दिए, यसमा आफ्नो झन्डा फहराए र एउटा बम राखे । बि.सं २०६४ चैत्रको संविधान सभा निर्वाचनमा यादवले धनुषा ५ संसदीय क्षेत्रमा प्रतिस्प्रधा गरे । १०,३९२ मत प्राप्त गरेर त्यो स्थान जिते । पहिलो चरणमा भएको निर्वाचन स्तगित भएपछि, २०६५ साउन ६ मा पुन दोस्रो चरणको निर्वाचन गराईयो । यस दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का उमेद्वार राम राजा प्रसाद सिंहलाई २८२ हराउदै उनी नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भए । उनले संविधान सभा खसेको ५९० मत मध्ये ३०८ मत पाएका थिए । उनले बि.सं २०६५ साउन ८ गते नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गरे । प्रधान न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले उनलाई राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा पद र गोपनीयताको शपथ दिलाए । शपथ ग्रहण समारोहमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायत अन्य महानुभवहरू उपस्थित थिए। उनले पनि उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई शपथ गराए ।
रामबरण यादवकाको जन्म २००३ माघ २२ गते थानी यादव र राम रति यादवको सन्तानको रूपमा भएको थियो । उनको विवाह जुलेखा यादव सँग भएको थियो। यादवको श्रीमती १९८३ मा मृत्यु भएको थियो । उनका सन्तानहरूमा दुई छोरा (डा. चन्द्रमोहन यादव र ई.चन्द्रशेखर यादव) र एउटी छोरी (अनीता यादव) हुन । यादव अहिले शीतल निवासमा छोरा (चन्द्रमोहन यादव) र छोरी (अनीता यादव)को साथ बस्छन्। उनका कान्छा छोरा (चन्द्रशेखर यादव) संयुक्त राज्य अमेरिकामा छन ।
रामवरण यादव बिद्यार्थी हुँदा देखि नै उनको राजनीतिक जीवनको शुरुवात भयो । उनी भारतको कलकत्तामा चिकित्साशास्त्रको बिद्यार्थी हुँदा त्यस समयमा भारतमा स्व-निर्वासनमा रहेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शम्सेर राणा, पुष्पलाल श्रेष्ठ र सरोज कोइराला जस्ता नेपाली राजनीतिज्ञहरूसँग उनको भेट भयो । यिनै नेताहरूबाट प्रभावित भएर यादव राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरे । उनी वि.सं. २०३७ मा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको लागि भएको आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा लागि परे। चिकित्सकको रूपमा अभ्यासरत रहँदा उनीले आफुलाई नेपाली काँग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ताको रूपमा राजनीतिमा स्थापित गराए । बि.सं. २०३७ देखि २०३९ सम्म उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको निजी चिकित्सकको रूपमा काम गरे ।
रामवरण यादव बि.सं २०४७ साल अघि भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा लागि परिरहे । त्यस आन्दोलन क्रममा उनले नौ महिना सम्म जेलमा बिताए। बि.सं २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र घोषणा भएपछि भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उनी धनुषा जिल्लाको क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उठे र विजयि पनि भए । उनी बि.सं २०४८ देखि २०५१ सम्म नेपालका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भए । उनले पुन: बिसं २०५६ देखि २०५८ सम्म नेपालका स्वास्थ्य मन्त्रीको कार्यभार सम्हाले । रामवरण यादवले नेपाली काँग्रेस पार्टीमा धेरै जिम्बेवारीपूर्ण पदहरू निर्बाह गरिसकेका छन । उनी १५ वर्ष केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यको रूपमा साथै संसदीय बोर्डका सदस्य र पार्टीको अनुशासन समितिका सदस्य थिए । राष्ट्रपति हुनु पूर्व उनी नेपाली काँग्रेस पार्टीका महासचिव थिए ।
अनिता यादवसँग राष्ट्रपति राम बरण यादव
राष्ट्रपति राम बरण यादव र वहा कि छोरी अनिता यादवसँग भारत कि राष्ट्रपति प्रतिभा देवि सिंह पाटिल र भारत का प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह
↑ २.० २.१ "DR. RAM BARAN YADAV PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NEPAL", Office of The President, Nepal।
विकिमिडिया कमन्समा रामवरण यादव सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=रामवरण_यादव&oldid=1059031" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन ३० जनवरी २०२२, १०:०९